Idaacadda alshabab oo baahisay tirada dadkii laga dilay dowladda farmaajo markii la doortay ka dib | Xaqiiqonews
Idaacadda alshabab oo baahisay tirada dadkii laga dilay dowladda farmaajo markii la doortay ka dib
Tan iyo markii 08-02-2017 xilka madaxweynaha DF loo doortay Maxamad Cabdullaahi Farmaajo, waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay in ka badan labaatan weerar oo lagu dilay mas’uuliyiin, saraakiil iyo askar ka tirsan DF.
Hagafey ayaa waxaa lagu rasaaseeyay gaari uu saarnaa, waxaana dilkiisa sheegatay Xarakada Al-Shabaab oo iyadu dagaal kula jirta ciidamada Amisom iyo maamulada ku daaban.
Rasaas lagu shannaqay gaari ay saarnaayeen isaga iyo ilaaladiisa ayaa waxaa kasoo gaaray dhaawac culus, waxaana weerarkaasi mas’uuliyaddiisa sheegtay Xarakada Al-Shabaab, halka DF ay sheegtay iney cambaareeneyso.
Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegatay weerarka lagu dhaawacay xildhibaankan, iyadoo maamulka Puntland uu aad uga murugooday dhacdadan.
Haddaba Intaa waxa dheer weerarada lagu qaado xeryaha ciidamada Amisom, kuwa dowladda iyo weerarada dhabba gallada ah oo sida joogta u dhaca, kuwaasoo iyagu aad u fara badan.